Wararka Maanta: Isniin, Mar 19, 2018-Guddoomiyaha Baarlamaanka oo xalay la kulmay madaxweyne Farmaajo
Isniin, Maarso, 19, 2018 (HOL) – Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed Cimaan Jawaari ayaa xalay kulan gaar ah la qaatey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka wada hadleen Khilaafka ka dhashay Mooshinka iyo sidii loo wajihi lahaa.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka tirsan Golaha Shacabka kana mid ah mudanayaasha Baarlamaanka ee sida weyn ugu dhaw dhaw guddoomiyaha ayaa VOA u sheegay in guddoomiye Jawaari uu kala hadlay madaxweynaha qodobo dhowr ah, gaar ahaan in sida xeer hoosaadka Baarlamaanku qabo muddo 10 cisho ah lagu meel-mariyo codeynta mooshinka ka dhanka ah oo ka bilaabaneysa 14kii bishan oo ay xildhibaannadu gudbiyeen Mooshinka.
Sidoo kale guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kala hadlay madaxweynaha in codeynta Mooshinka lagu qabto meel amaan ah oo ka baxsan xarunta Golaha Shacabka, iyadoo ay goob joog yihiin, Guddiga ka socda xildhibaannada Aqalka Sare, Ururrada bulshada rayidka ah iyo beesha Caalamka intaba.
Guddoomiyaha Baarlamaank Soomaaliya Prof Maxamed Cismaan Jawaari ayaa hadda u muuqda mid ku ad-adag in cod la galiyo Mooshinka ka dhanka ah isaga oo meesha ka saaray in uu xilka iska casilayo.
Xildhibaan Beenebeene ayaa sheegey in kulanka guddoomiyaha Baarlamaanka iyo madaxweynaha leysku afgartay.
In xilka laga qaado Prof Jawaari ayaa u baahan in loo helo codad gaaraya 184 xildhibaan oo ah arin aad u adag marka la eego tirade guud ee Baarlamaanka.